Waa qofka dunnida ugu Da,da weyn Waxa ay ka Warantay Wixii ay Usoo Taagneyd !! | Somaliland Post
Home Maqaallo Waa qofka dunnida ugu Da,da weyn Waxa ay ka Warantay Wixii ay...
Waa qofka dunnida ugu Da,da weyn Waxa ay ka Warantay Wixii ay Usoo Taagneyd !!
Raashinka ay dunnidu ugu jeceshahay waxay ku sheegtay raashinka dalka Japan dhaqanka u ah iyo bariiska.
“Khilaaf waxba ma keeno ee xal hala gaadho” ayay tidhi Misao Okawa, Ayada oo 102 sanno jir ah ayay maalin kuftay waxaana ay ka jabtay lugta midig haddana mar mar ayay sheegtay inay xanuun ka dareento.
Xafladda dhalashadeeda waxaa ka qeyb galay wariyaal shaqaalaha isbitaalka sida gaarka ah loogu daweeyo Hay’adaha falanqeeya arrimaha cimriga dadka waxaa ay sheegaan in da’da dumarka Japan ay badi gaadho 85 sanno halka cimriga Ragguna gaadho 79 sannadood
Source—HUFF POST the third Motic